SAGARWINE - အခြားသူတွေအတွက် အလုပ်လုပ်နေရုံနဲ့ ချမ်းသာနိုင်လား?
Home/ Business/အခြားသူတွေအတွက် အလုပ်လုပ်နေရုံနဲ့ ချမ်းသာနိုင်လား?
On: 20 Nov 2020 Posted in Business Comments: 1 Views: 80
လူတိုင်းမှာ လက်ရှိအလုပ်ကနေထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုခု လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစိတ်ကူးတွေက လက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်မလာကြတာ များပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ လက်ရှိအဆင်ပြေနေတဲ့အခြေအနေက ရုန်းထွက်ပြီး အခက်အခဲကြုံတွေ့ရမှာကို စိုးရိမ်ကြတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ စွန့်စားမှုမလုပ်ရင် အောင်မြင်မှုလည်း ရနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက တခြားသူတစ်ယောက်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေရုံနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
၁။ စွန့်စားမှုမလုပ်ချင်လောက်အောင် အခြေကျနေတယ်
သင့်မှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေရနေတဲ့ အလုပ်အကိုင်တစ်ခုရှိနေမယ်။ နေထိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလည်း ကာမိနေမယ်။ လကုန်ချိန်မှာ စုဆောင်းစရာငွေစကြေးစလေး အနည်းငယ်ကျန်မယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်လောက်အောင် သက်တောင့်သက်သာအခြေအနေတစ်ခုကို ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခု လုပ်မယ်ဆိုရင် ဝင်ငွေလည်း မသေချာသလို ကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက် ပူပန်ရမှာကို ဘယ်သူကမှ မဖြစ်ချင်ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို စွန့်လွှတ်ပြီး အခြားသူတစ်ယောက်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးရင်း အခြေကျသွားပါလိမ့်မယ်။
၂။ အခြားသူတစ်ယောက်အတွက် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို တည်ဆောက်ပေးနေတယ်
သင့်အနေနဲ့ အခြားသူတစ်ယောက်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတာက သူတို့ရဲ့ဓနဥစ္စာကို ကူညီတည်ဆောက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာပဲ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်ကိုယ်တိုင်လည်း သူတို့လို ချမ်းသာကြွယ်ဝချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အရည်အချင်းတွေကို သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးချသင့်ပါတယ်။ အခြားသူတွေအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးနေတဲ့အချိန်တွေကို သင့်အတွက်အသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ထိ အကျိုးရှိနိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်နိုင်ပြီဆိုရင် အခွန်ဆောင်ရတဲ့ငွေကလွဲလို့ အခြားအကျိုးအမြတ်အားလုံးက သင့်အတွက်ချည်းပါပဲ။
၃။ အချိန်က ငွေထက် တန်ဖိုးရှိတယ်
ငွေကြေးဆိုတာက စုဆောင်းထားလို့ရသလို ပိုရှာချင်ရင်လည်း ရှာနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်ကတော့ ဒီလိုလုပ်လို့မရပါဘူး။ ကုန်လွန်သွားတဲ့အချိန်တွေကို ပြန်မရနိုင်သလို စုဆောင်းထားလို့လည်း မရပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့အချိန်တွေကို အခြားသူတွေအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးရင်းနဲ့ ကုန်ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင် သင်ကိုယ်တိုင်အတွက် အသုံးချဖို့ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ချမ်းသာချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့အချိန်ကို အခြားသူဆီမှာ ရောင်းတာထက် ပိုအကျိုးအမြတ်ရအောင် အသုံးချသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့အချိန်ကို သင်ကိုယ်တိုင်စီမံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ငွေစုဆောင်းဖို့ပဲ စိတ်အားထက်သန်နေမယ်
ငွေစုဆောင်းခြင်းဟာ အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေစုဆောင်းနေရုံနဲ့ ချမ်းသာမလာနိုင်ပါဘူး။ သင့်အနေနဲ့ ချွေတာစုဆောင်းလိုက်တဲ့ ငွေပမာဏဟာ ဝင်ငွေမဟုတ်ပါဘူ။ ဒါ့ကြောင့် အခြားသူတွေဆီမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး ရသမျှငွေကို ချွေတာစုဆောင်းနေရုံနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ငွေကြေးကို တိုးပွားလာအောင် အလုပ်လုပ်ခိုင်းဖို့ လိုပါတယ်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်တာ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်တာတွေကသာ သင့်ရဲ့ငွေကို တိုးပွားစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2020-11-20T15:14:38+06:30Addedacomment on 20 Nov 2020 at 3:14 PM